आफ्नो औंलाहरूको स्न्यापमा ब्लग बनाउनुहोस् | Polyblog
लग - इनब्लगसुरु गर
ब्लगलग - इनसुरु गर
आफ्नो औंलाहरूको स्न्यापमा ब्लग बनाउनुहोस्
Polyblog ले तपाईंलाई सजिलैसँग बहुभाषिक ब्लग सिर्जना गर्न र सामग्री मार्केटिङको साथ तपाईंको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछ।
पोलिब्लग किन प्रयोग गर्ने?
1. छिटो र हल्का वजन
कुनै पनि व्यवसायको लागि गति र दक्षता महत्त्वपूर्ण छ। हामी त्यो बुझ्दछौं र त्यसैले हामीले एउटा प्लेटफर्म निर्माण गरेका छौं जसले तपाईंको सम्पूर्ण सामग्री मार्केटिङ प्रक्रियालाई गति दिन्छ।
2. आफ्नो सामग्री सजिलै अनुवाद गर्नुहोस्
कुनै पनि देश र कुनै पनि भाषालाई लक्षित गर्नुहोस् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो व्यवसाय बढाउनुहोस्। हाम्रो स्वामित्व सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेर, तपाइँ सजिलै संग एकल ड्यासबोर्ड अन्तर्गत आफ्नो बहुभाषी ब्लग व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
3. न्यूनतम डिजाइन
हामी सादगीमा विश्वास गर्छौं। त्यसकारण हामी तपाईंको ब्लगलाई सफा र डिजाइनमा सरल बनाउनेछौं। तपाईंले Polyblog मार्फत तपाईंको ब्लग निर्माण गर्दा कस्तो देखिनेछ भन्ने नमूना यहाँ छ।
4. SEO अनुकूलित
SEO तपाईको सबै सामग्री मार्केटिंग प्रयासहरूको आधारशिला हो। Google बाट अर्गानिक खोज ट्राफिक प्राप्त गर्नु कुनै पनि ब्लगको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले तपाईको ब्लगलाई SEO मैत्री बनाउन धेरै स्रोतहरू खर्च गरेका छौं।
5. पूर्ण रूपमा व्यवस्थित होस्टिंग
तपाईको सर्भरहरू प्रबन्ध गर्ने टाउको दुखाइसँग सम्झौता गर्न आवश्यक पर्दैन। हामी सुपर-फास्ट र भरपर्दो वेब होस्टिंग प्रदान गर्दछौं।
सामग्री मार्केटिङ बारे केही रोचक तथ्य
“77 प्रतिशत मानिसहरू नियमित रूपमा अनलाइन ब्लगहरू पढ्छन्”
“दैनिक पोस्ट गर्ने ६७ प्रतिशत ब्लगरहरूले आफू सफल भएको बताएका छन्”
“अमेरिकामा ६१ प्रतिशत अनलाइन प्रयोगकर्ताले ब्लग पढेर केही न केही किनेका छन्”
कसरी सुरु गर्ने
1. दर्ता र सेटअप
Polyblog मा दर्ता गर्नुहोस् र Polyblog लाई आफ्नो वेबसाइटसँग एकीकृत गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो इमेल ठेगाना र वेबसाइट डोमेन प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
2. लेखहरू थप्नुहोस्
तपाईंका लेखहरू तयार भएपछि, तपाईंले Polyblog ड्यासबोर्ड प्रयोग गरेर आफ्नो ब्लगमा थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई प्रकाशित गरेपछि, तपाईंको सामग्री तपाईंको ब्लगमा लाइभ हुनेछ।
3. तपाईको खोज कन्सोलमा तपाईको SEO वृद्धि ट्र्याक गर्नुहोस्
हामी तपाइँको लागि प्राविधिक SEO को हेरचाह गर्नेछौं। हामी स्वचालित रूपमा साइटम्यापहरू उत्पन्न गर्नेछौं र तिनीहरूलाई तपाईंको Google खोज कन्सोलमा अपलोड गर्नेछौं। तपाईंले Google खोज कन्सोलमा आफ्नो वृद्धि ट्र्याक गर्न आवश्यक छ।
के म आफू अनुकूल डोमेन प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, तपाईं हाम्रा सबै योजनाहरूसँग आफू अनुकूल डोमेन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले हाम्रो प्रणालीसँग आफ्नो डोमेन सेटअप गर्नुपर्नेछ।
Polyblog र अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरू बीच के भिन्नता छ?
Polyblog विशेष गरी बहुभाषी सामग्री व्यवस्थापनको लागि डिजाइन गरिएको हो। बहुभाषिक सामग्री मार्केटिङका धेरै फाइदाहरू छन् तर सामान्यतया यसलाई लागू गर्न गाह्रो छ। Polyblog ले बहुभाषिक ब्लगको व्यवस्थापन र प्रचार गर्न धेरै सजिलो बनाउँछ।
के मैले मेरो ब्लगलाई पृष्ठ गति र अन्य प्राविधिक एसईओ कारकहरूको लागि अनुकूलन गर्नुपर्छ?
पटक्कै होइन, Polyblog पहिले नै पृष्ठ गति, लिङ्क संरचना, साइटम्याप, मेटा ट्याग, र थप जस्ता सबै महत्त्वपूर्ण प्राविधिक एसईओ कारकहरूको लागि अनुकूलित छ।
Polyblog कसको लागि हो?
Polyblog विशेष रूपमा स्टार्टअपहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो जुन उनीहरूको सामग्री मार्केटिङ यात्रा सुरु गर्न छिटो र उत्तरदायी ब्लग चाहन्छन्।
के मैले प्लगइनहरू र विषयवस्तुहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ?
Polyblog पहिले नै सफा, उत्तरदायी विषयवस्तुको साथ आउँछ र तपाईलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू पूर्व-स्थापित छन्। यस तरिकाले तपाइँ तपाइँको ब्लगको साथ तुरुन्तै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र प्राविधिकताहरूमा धेरै चिन्ता नगरी उच्च-गुणस्तरको सामग्री प्रकाशित गर्नमा स्पष्ट रूपमा फोकस गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं मलाई Polyblog मार्फत बनाइएको ब्लगको उदाहरण देखाउन सक्नुहुन्छ?
पक्का, हाम्रो शीर्ष ग्राहकहरु मध्ये एक को ब्लग जाँच गर्नुहोस्: https://www.waiterio.com/blog
हाम्रो लागि नमस्ते मात्र लेख्नुहोस्